MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA GORDON SETTER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Gordon Setter
Gordon Setter — Lahaanshaha sawirka David Hancock
Liistada Gordon Setter Mix eeyaha eyda
Magacyada Kale ee Eyga
Gordon Castle Dejiye
Dejiyaha Gordon waa mid caato ah, laakiin ku xeel dheer qaab dhismeedka. Madaxa ayaa qoto dheer leh masarka dheer. Afku waa inuu ahaadaa ilaa inta dhakada, oo leh joogsi qeexan. Sanka madoobaa waa ballaadhan yahay. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha gaduudka ahi waa bunni madow. Dhegaha dhaadheer ayaa hoos loo dhigaa, heer isku mid ah leh indhaha, oo u dhow dhow madaxa. Jadwalka sare ayaa waxoogaa u janjeera xagga hore iyo xagga dambe. Dabada gaaban lama xirayo, mana gaarto hocks. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Koodhka jilicsan ee dhalaalaya ama waxyar baa lulaya ama toosan. Timaha dhagaha, caloosha hoosteeda, laabta, dhabarka lugaha, iyo dabada ayaa ka dheer tan jirka intiisa kale. Baalashka xaga hoose ee dabada ah wuxuu ka bilaabmayaa sagxad dheer wuxuuna gaagaabayaa markuu gaaro caarada, wuxuuna bixinayaa muuqaalka saddexagalka. Dejiye Gordon waa dejiyeha keliya ee ku yimaada madow oo leh calaamado tan ah. Calaamadaha maqaarka ayaa ah midabka hodanka ah ama mahogany oo midab ahaan leh waxayna ka muuqdaan indhaha, dhinacyada sanka, cunaha, laba barood oo xabadka ah, lugaha, iyo hawo-mareenka. Waxaa laga yaabaa in xabadka uu ku yaalo bar yar oo cad.
Dejiye Gordon waxaa lagu kala saaray daacadnimadiisa iyo adeeciddiisa labadaba. Waa edeb, dabeecad macaan, eey u heellan, samaynta wehel lagu farxo oo carruurta ku fiican. Caqli badan oo diyaar ah, waa a ugaadhsade xirfad leh taasi waa dhif in lagu qaldo carafta. Geesi, farxad iyo kalgacal leh, Baahiyaha noocan ah ayaa loo baahan yahay jimicsi fara badan ama waxay noqon kartaa mid sare. Aad daacad ugu ah qoyska, waxay ku kala fogaan kartaa shisheeyaha. Guud ahaan way ku fiican yihiin xayawaanka kale laakiin waxaa laga yaabaa inay isku dayaan inay xukumaan haddii ay tahay la'aanta hoggaanka aadanaha . Ku habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine waa lagama maarmaan. Noocani wuxuu jecel yahay inuu meeraysto, sidaa darteed waa fikrad fiican inaad haysato deyr ood leh. Eydu waxay noqon karaan kuwo isku dhex yaacsan. Hore tababar ula hoggaan wanaagsan ka hor intaan caadooyinka xun la dhigin iyadoo aysan ahayn wax aan macquul aheyn, way fududahay in laga hortago dabeecadaha xun marka loo eego hagaajinta. Tababbarka eeyahaani dhab ahaan maahan wax adag, haddii milkiilayaashu ay adag yihiin, laakiin deggan yihiin. Hadday dareemaan milkiilayaashu waa kuwa camal qabow ama aan caadi ahayn way madax adkaan doonaan. Eygan waa in loo baraa dhammaan xaaladaha (dadka, xayawaanka iyo waxyaabaha) sidii arday yar si uu u soo saaro eey si wanaagsan isu dheellitiran. Dejiye Gordon ah oo loo soo saaray sidii eey bisadaha si fiican ula macaamili doonaan iyaga. Haddii shisheeyayaal soo booqdaan, waxay qaataan dabeecad sugitaan iyo arag. Guud ahaan waxay si wanaagsan ula wadaagaan eeyaha kale iyo carruurta maxaa yeelay saaxiibtinimo ayey u yihiin qof walba.
Dhererka: Ragga 24 - 27 inji (61 - 69 cm) Dumarka 23 - 26 inji (58 - 66 cm)
Miisaanka: Ragga 55 - 80 rodol (25 - 36 kg) Dumarka 45 - 70 rodol (20 - 32 kg)
Khadadka aagagga inta badan way ka yar yihiin kana fudud yihiin khadadka bandhigga (noocyada keydka).
Guud ahaan caafimaad qab, laakiin qaar baa u nugul cudurka dysplasia ee misigta, cudurada indhaha sida atrophy retinal progress (PRA) iyo cataracts. Eeyadan ayaa kala ah u nugul ubax waana in la quudiyaa laba ama saddex cunto oo yaryar maalintii halkii laga siin lahaa mid weyn.
Dejiye Gordon laguma talinayo nolosha guriga. Waa wax yar oo aan firfircooneyn gudaha (haddii Gordon Setter uu helo dhaqdhaqaaq ku filan oo dibedda ah wuu xasilloon yahay gudaha gudaha) wuxuuna ku fiicnaanayaa ugu yaraan daarad weyn oo ammaan ah oo xayndaab leh halkaas oo uu ku socon karo bilaash. Dareenkooda ugaarsiga ayaa ku qalqaaliya inay meeraystaan, sidaa darteed deyr wanaagsan oo ku wareegsan gurigaaga ayaa muhiim ah.
Dhamaan dejiyeyaashu waxay u baahan yihiin maalinle dheer, socod socod ama waxay noqon doonaan kuwo aan xasilloonayn oo ay adag tahay in la maareeyo. Intaad socodka ku jirto hubso in eey ciribta ka xigto ama ka dambeyso qofka hogaanka haya, marna hore, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan inay si xor ah u ordaan iyagoo ku badbaadaya daarad deyr leh.
Qiyaastii 10-12 sano.
Qiyaastii 6 ilaa 8 eey
Shanleynta joogtada ah iyo cadayashada jilicsan, fidsan, jaakad dherer dhexdhexaad ah ayaa ah waxa loo baahan yahay si loogu hayo xaalad heer sare ah. Waxaa muhiim ah in laga hubiyo burrsooyinka iyo dhaldhalaalka, iyo in la siiyo taxaddar dheeraad ah marka eeyga uu daadinayo jaakadiisa. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Timaha jarjar cagaha hoostiisa ciddiyahana ha iswada qabsan. Noocani waa celcelis daadiya.
Gordon Setter waxaa laga sameeyay Scotland horraantii qarnigii 17aad. Sameeyahan madow iyo tan ayaa caan ku noqday Duke Alexander IV ee reer Gordon horaantii qarnigii 19aad. Waxaa loo adeegsaday sida eeyaha shimbiraha, iyagoo leh dareen ur wanaagsan. Eeyadu waxay u jeedin jireen shimbirta dhacday, way soo ceshan jireen oo waxay ku soo celin jireen ugaadhsadaha. Gordon wuxuu lahaa adkeysi weyn wuxuuna ku ugaarsan karaa cimilo xun dhul iyo biyo labadaba, laakiin ma aheyn mid dhakhso badan marka la barbardhigo tilmaamayaasha natiijada ayaa keentay inuu lumiyo caannimadiisa maadaama ugaarsatadu doorteen noocyo kale. Dejiyaha Gordon wuxuu ka mid ahaa taranka loo adeegsaday horumarinta Dejiye Irish . Gordon wuxuu sameeyaa eey hal nin ah oo wanaagsan. Gordon Setter wuxuu AKC aqoonsaday 1884. Qaar ka mid ah hibada Gordon Setter waxaa ka mid ah ilaalin, ilaalin, ugaarsi, raad raadin, tilmaamid iyo soo helid.
Gun Ey, AKC Sporting
Dexter Nova Bright Star Gordon Setter oo ah eey yar markay tahay 15 toddobaad
'Kuwani waa sawirada Gordon Setter Crownline's Sunset Pride (Sunny). Waxay ku jirtay kaliya 6 toddobaad sawirada (iyadu waa qof weyn hadda). Ma ahan oo kaliya inay qurux badan tahay, laakiin iyadu waa mid caqli badan. Waxay ku habboon tahay sharraxaadda taranka inay tahay T. Waa qof caqli badan, jacayl leh, ku nool inay ka farxiso Aabbaha, jecel ugaarsiga iyo firfircoonida badan. Nasiib wanaag waxaan heysanaa dayr weyn oo ood leh oo ay ku xoojiso xooggeeda. Ninkaygu wuxuu u dhisay guri aad u weyn iyo aqal, laakiin wuxuu yidhi waa inaynu u iibin lahayn sariir dhererkeedu sarreeyo oo boqoraddu le'eg tahay maadaama ay tahay halka ay hadda seexato! Waxaan ku faraxsanahay inaan iyada ku haysano nolosheena. '
Xiddig Iftiiminaya Midab Ballaaran (Rocky) oo ah Gordon Dejiye 23 bilood
Duff Gordon Dejiye 7 sano jir ah
Xiddigta Midabka Biiqda leh ee dhalaalaya (Rocky) oo ah Gordon Dejiye 2 'sano jir ah
Sparkling Color Bright Star (Rocky) oo ah 29 bilood, oo ay leedahay Stephanie Mogollon
Dexter Nova Bright Star Gordon Deji 15 ½ bilood
Gordon Setter oo 5 jir ah oo ku nasanaya sariirta
Eeg tusaalayaal badan oo Gordon Setter ah
Sawirada Gordon Setter 1
Sawirada Gordon Setter 2
Eeyaha ugaarsiga ah
Habaarka Kemmer Stock Mountain
isku darka shaybaarka eyga Australia
isku darka sheltie iyo adhijirka Australia
sawir eey shitzu ah
kalabar pitbull nus buluug heeler
sawirada ingiriiska springer spaniel
shaybaarka dhiig isku qasan eeyo yaryar oo iib ah